Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Doorashadii Degaanka ee 28/11/2012 oo Xukumada Kulmiye ay taariikhda ku gashay baalmadow
Doorashadii Degaanka ee 28/11/2012 oo Xukumada Kulmiye ay taariikhda ku gashay baalmadow
Dec 02, 2012 ENTERTAINMENT 0
Xukuumada Hadda Jirtaa waxay Xanuun-Buufis ah ka qaadey qaar ka mid ah Hogaamiyayaasha ururada iyo xisbiyadii uu tar-tanku dhex-yaaley.
Buufiskaa oo uu ku lamaan yahay Sas-badan oo Saameeyey dhamaan Madaxda Sar-sare ee Xukuumada Hada jirta ,Taas oo Sababtey in Xukuumada hadda jirtaa Marin habaabiso Tubtii toosneyd ee loogu talo galey in ay ku socoto kuna dhamaato Doorashada Golayaasha Degaanka Somaliland.
Xukuumada Silaanyo waxay Cadeysatey oo Indhaha ummaddu Qabteen iyada oo isticmaaleysa Shax-qabyaaladeysan kuna jihaysan Degaan-Degaan, iyo Beel-Beel iyada oo weliba isticmaaleysa Madaxdeeda Sar-sare ee Xukuumada sida Wasiirada, Badhasaabyada iyo Agaasimayaasheeda, waxaa indha ummaddu milicsadeen iyada oo ay madaxda Xukuumadu Xan-baarisan Lacag- Buuran oo Cid-wali aragtey. Lacgtaa Hantiga qaranka ah ee Xukuumadu Xaalasha ka dhigatey waxaa la isku Raacey in tahay Lacgtii abid ugu badneyd ee Xukuumad Somaliland soo martaa ay Olole Doorasho ku gasho.
-Waxaa xusuus qorka Xukuumada hada jirta loogu qorey sida sharaf-xumada ah ee Dawlad xumada ah ee Cadaanka ah ee Madaxda sar-sare ee Xukuumadu ugu tagri faleen Hantidii ummadda una qaybinayeen iyaga oo ka dhex- muuqda Dhamaan goobihii Doorashooyinka ee Gobolada iyo Degmooyinka Somaliland.
– Waxaa Xukuumadani noqotey Xukuumadii ugu horesey ee Lacag iyo Qabyaalad hor-dhiga kuna baayaca Muwaadiniin musharaxiin ah oo daacad ah oo ay ka goneyd in ay aqoontooda yar ummaddooda ugu shaqeeyaan Degaankoodana wax-kaga qabtaan.
– Xukuumada hada jirtaa waxaa taariikhda u galey oo ay noqotey Xukuumadii ugu horeysey ee Madaxweynihii ummadda ka dhexeeyey uu ka dhex-Ololeeyo Gobolada iyo Degmooyinka wadanka iyo weliba xaruntii dhexe ee xisbigii isaga soo saarey taas oo layaab iyo afkala qaad ku noqotey Muwaadiniintii Somaliland ee u wada haystey in uu madax-weyne uwada yahay oo u siman yahay dhamaan ummadda, xisbiyada iyo ururada tar-tamayaba.
– Xukuumada hada jirtaa waxay noqotey Xukuumadii ugu horeysey ee Cududa Ciidamada qaranka ku isticmaasha in ay cod-kuhesho oo ay u codeeyaan Xisbiga xaakimka kulmiye Sanaadiiqda codeyntana u Buuxiyaan. Waxay xukuumadani noqotey xukuumadii ugu horey ee Hantidii ummadda u adeegsata Komishanka Gobolada iyo Muraaqibiinta Gobolada iyo Degmooyinka Qaar,ka mid ah sida Saaxil, Sanaag, Salel , lughaya iyo Seylac. Taas oo sababtey in Doorashada Goobahaas lagu shubto oo lagu noq-noqdo iyada oo aan cidna laga gabaneyn.
– Waxay Xukuumadani noqotey Xukuumadii ugu horeysey ee Hadh- Cad Lacag ku iibsata Musharaxiinta ay u aragtey in ay dhaqaale u Baahan yihiin iyada weli u raacisey in ay mustaqbalka Shaqooyin siin-doonto hadii ay xukuumada udhega-nuglaadaan. Arinta Taban ee iibka musharaxiinta ahi waxay dhaawac weyn gaadhsiisey sharaftii, karaamadii musharxnimo iyo hab-dhaqankii dimuqraadiyada curdinka ah ee Somaliland.
– Ka dib markii Musharaxiinta qaar arkeen sida taban ee wax- usocdaan waxaa xukuumadani noqotey Xukuumadii ugu horey Somaliland soo marta ee ay Is-casilaad ku dhawaaqaan Musharaxiin Degaan oo sugi kari waayey inta natiijada doorashadu soo baxeyso.kana door bidey in aan Xukuumada hada jirta waxba lagu darsan.lana shaqeyn maadaama aaney waxba xeerineyn.
Waxaa ay Xukuumada hada jirtaa noqotey Xukuumadii ugu horeysey ee Somaliland soo marta ee si badheedh ah ugu Xoog-sheegata xisbiyada iyo ururada iyada u meel-dhigatey xeelad farsamo iyo dhaqaale ay Hoosta kaga farureyso, Guntana kaga rideyso, korkana kaga fur-fureyso iyada oo weliba ku fasaxdey dilaaliin iyo Malaaliin ka dhex-furey xisbi kasta iyo urur kasta seylad Musharaxiinta lagu kaga iibsado iyagoo qaarna ka dhigaaya Daabaxaad shaanbadeysan , Qaarna ka dhigaaya Cadeysimo kulmiye ku-xidhiidhsan oo xil sugayaal ah una balan qaadey in xukuumadu xilal u dhiibi doonto, halkaasna ay xisbiyada qaar sida Xisbiga Ucid ay mar keliya 5 Musharax ka saareen ( ka -iibnsadeen) iyada oo ay mudo aad u yar oo 5 Caano maal ahi ay ka hadhey Maalintii Doorashada loo dareerayey ee ku taariikhniisneyd 28/11/12.
– Waxaa Xukuumada Siilaanyo looga fadhiyey oo laga filaayey in ay Ummadda Somaliland ku hagto Ilbaxnimo siyaasadeed iyo hab-dhaqan Dimuqraadiyeed oo ku socda wado toosan, Laakiin Nasiib daro Taasi maydhicin. Waxaana Doorashadan Natiijadeeda weli la sugayaa ay Dhaawacdey oo indhihii Caalamku Daalacdeen in ay hoos u dhacdey Amaantii badneyd iyo Qadarintii badneyd ee Somaliland ku kasbatey Doorashooyinkii Hore u soo marey.
Walaahum-aclum , Wa-Bilaahi Towfiiq
DAAWO VIDEO Hallaagii ka dhacay Duleedka Degmada Xudun Hugunka Rasaasta iyo Bakhtiga Jabhada SNM oo banaanka daadsan Muqdisho oo 22 sano kadib maanta Isbaaro la'aan kusoo toostay iyo dareenka dadka reer Muqdisho